Kumnandi eCraigton! Ibhedi eyi-1 kufutshane nesixeko kunye nesikhululo seenqwelomoya :)
Indawo esembindini ekufuphi nezinye iigadi ezintle zolonwabo kunye nokuba kufutshane neziko leSixeko saseGlasgow, ilele le flethi ithokomele kakhulu. Vala amakhonkco ezothutho kwisikhululo seenqwelomoya kunye nemizuzu eyi-10 ukuya kumbindi wesixeko.
Indawo yokuhlala ibandakanya indawo yokuphumla eneplani evulekileyo eneNetflix yasimahla/eNkulumbuso* kunye nekhitshi elifakwe kule mihla. Igumbi lokuhlala / indawo yokusebenzela kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokulala eliphindwe kabini elijonge kwiigadi zoluntu. Igumbi lokuhlambela elitsha & langoku.
I-Bellahuston Park kukuhamba nje okufutshane, ecaleni kwezinto ezininzi ezifanelekileyo.
*Kwindawo yokupaka izithuthi SIMAHLA yonke imihla yonke imihla ngaphandle kweflethi nakwizitrato ezisecaleni ezijikelezileyo. Ukupaka ePaisley Rd West kuthintelwe, nceda ujonge ezi zinto ukuba upaka kwindlela enkulu ukunqanda ukufumana itikiti.
Having previously worked in the whisky industry for over 10 years I’m now excited to start a new career in teaching! I enjoy hillwalking, socialising and meeting new people :)
Ndifumaneka ngalo lonke ixesha kwiindwendwe zam - zikhululeke ukundithumelela umyalezo okanye unditsalele umnxeba kwaye "Ndiza kuba lapho" :)